प्रदेश नम्बर ३ को समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ : मन्त्री नेपाल::Nepal Online News Portal
प्रदेश नं. ३ काे समृद्धि तथा विकासका विगत, वर्तमान र भावी याेजनाका बारे प्रदेश नं. ३ प्रदेश सरकारका उद्याेग, पर्यटन, वन तथा वातावरणा मन्त्री अरुणप्रसाद नेपालसँग अल नेपाल मिडियाका अध्यक्ष तथा सम्पादक कुमार ओझाले गर्नु भएकाे संक्षिप्त कुराकानी :
♦ प्रदेशले के कस्ता काम के कसरी गरिरहेको छ ?
हाम्रो प्रदेशले एक बर्ष भन्दा केही समय बढी बितायो । हामीले भित्रि कामहरु धेरै गनुपर्ने थियो । प्रदेश भर्खर बनेको त्यसका विधि, विधान र ऐन कानून थिएनन् भौतिक संरचना र कर्मचारीहरु थिएनन् । यि सबै काम हामीले गर्नु पर्ने थियो । जति बेला हामी सरकारमा गयौ, त्यतिबेलै हामीले भनेका थियौं । यो बर्ष कानून निर्माणको बर्ष हुनेछ त्यस पश्चात कामलाई गति दिन्छौं भनेर । गत बर्ष हामीले धेरै कानूनहरु बनाएका छौं, नीति प्रष्ट बनाएका छौं । भौतिक निर्माणका काम, कृषि क्षेत्रका काम, सामुदायिक खेतीको थालनी गरेका छौं । नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेर योजना बनाएका छौं । यहिबर्ष देखि त्यो काम हामी टेन्डर खोलेर गर्ने छौं । हामीले ६६ बटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा उद्योग ग्राम बनाउने योजना बनाएका छौं । गाउँगाउँमा साना उद्योगहरु सञ्चालन हुनेछन । ति उद्योगग्रामलाई उद्यमशिलता विकास गर्ने ढंगले विकास योजना बनाई रहेका छौं । पर्यटनको हिसावले नेपालमा भएका गन्तव्यहरु काठमाडौ र चितवन यसै क्षेत्रमा पर्दछन । यसलाइै व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । त्यस बाहेक अन्य क्षेत्रको पहिचान गनु पर्नेछ ।
काठमाडौबाट सबैभन्दा नजिक रहेको जुगल हिमाललाई मेरो मन्त्रालयको पहलमा खुल्ला गरिएको छ र यस्को पहिलो सफतपूर्वक आरोहण पनि भएको छ । अब त्यो क्षेत्र पर्यटनको महत्वपूर्ण क्षेत्र बन्नेछ । हामीले लाङ्टाङ र हेलम्बुको विचमा रहेको गोजलापास केही समय देखि बन्द छ त्यो खोलियो भने अहिले लाङटाङ जाने पर्यटकको संख्या दोव्वर हुन्छ भनेर पर्यटन ब्यवसायीले भने अनुसार त्यो पास नेपाली सेनासंग मिलेर खोल्ने योजनामा छौ । हाम्रो प्रदेशले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भिडियो डकुमेन्ट्री आठवटा भाषामा बनाउने र संसार भर प्रचार प्रसार गर्ने योजना बनाई रहेका छौं । १० बटा हिल स्टेशनहरु बनाउने योजना बनाएका छौं । त्यो यसै बर्ष टेन्डर हुनेछ । त्यसको डिपिआर भैसकेको छ । त्यस बाहेक हामीले एउटा हिमालयन टे«लको निर्माण गर्ने योजना भूगोलका हिसावले अप्ढ्यारो ठाउँ तर रमणिय बिभिन्न क्षेत्रमा फलामका सिंडिहरु राखेर पदमार्ग बनाईरहेका छौं ।
एडुभरेन्चस खेलको लागि अध्ययन भैरहेको छ । धार्मिक र ऐतिहासिक स्थल, किल्ला र गढीहरु छन । जसमा बसेर हाम्रा पुर्खाले विदेशी शत्रुलाई लखेटे र नेपाललाई बचाएका थिए । त्यस्ता गढी र थुमहरुको अध्ययन र विकास गर्ने भग्नावशेषको पुराना रुपमा रहेका दरबारका भग्नावशेषलाई संरक्षण गर्ने सम्बद्र्धन गर्ने योजना बनाई रहेका छौं । एक बर्ष पहिले देखि सिन्धुलीगढीमा रहेको दरबारको पूनःनिर्माण भैरहको छ । यसरी पर्यटनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम भैरहेको छ भने वन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि अध्ययन गरेर डाडाँ पाखालाई हरियो बनाएका छौं ।
अब वनलाई कृषि, उद्योग, पर्यटनसँग जोडेर समृद्धि भित्र्याउनु पर्छ भनेर नगदेवाली र जडिबुटी खेतीलाई आधुनिक ढंगले ठूलो परिमाणमा गर्नु पर्छ भनेर लागी रहेका छौं । चाँडो प्रतिफल दिने खाद्यान्न र नगदेबालीका बोटविरुवा लगाउने भनेर काम गरिरहेका छौं । काठ उत्पादन गरेर त्यसलाई विदेशमा निकासी गर्ने र त्यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिने गरी काम गरिरहेका छौं । खाद्यान्न र काठमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने गरी हाम्रा योजना बनिरहेका छन । कानून बनाएर जंगलमा सुकेका ढलेका काठ संकलन गरी उपभोगमा ल्याउने गरी अध्ययन भैरहेको छ । नयाँ रुख रोप्ने वातावरण जोगाउने योजना बनाएका छौं । समग्ररुपमा हामीले सडक बनाउने, खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, हरेक विद्यालयमा एक जना नर्स राख्ने छौं । र विद्यार्थीहरुको उपचार गर्ने छौं, प्रत्येक गाउँमा कानूनी सहजकर्ता राखेर सर्वसुलभ ढंगले सेवा दिने गरी योजना बनाएका छौं ती काम भैरहका छन । प्रत्येक गाउँमा दुध उत्पादन गर्ने र किसानले एक लिटरमा एक रुपैंया पाउने गरी ब्यवस्था गरिरहका छौं । शिक्षा सुधार देखि स्वास्थ्य र वातावरण सुधारका काम तीब्र रुपले भैरहका छन् । यसरी हामीले अघिल्लो बर्ष पनि काम गर्यौं यस बर्ष पनि गरिरहेका छौं । भोली परिणाम देखिने गरी यसरी काम भैरहेका छन ।
♦ तपाईंहरु लामो राजनीति अनुभव भएका जनताका दुःखसुख देखेका नेता हो भन्नु हुन्छ तर कामको परिणाम तत्काल देखिएन नि पार्टीले घोषणा पत्रमा जनाएका काम पनि भएको देखिएन किन ?
पहिलो त हाम्रो देश लामो राजनीतिक अस्थिरतामा गुज्रियो, कुनै पार्टीले बहुमत नल्याउँदा ९ महिनामा सरकार फेरिने अवस्था भयो । जसले गर्दा दीर्घकालिन योजना बनाउनै सकेन । अहिले त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अब हाम्रो पार्टीको सरकारले दीर्घकालिन योजना बनाउँदैछ । दीर्घकालिन योजनाको परिणाम तत्काल देखिदैन पछि नै देखिन्छ यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । अर्को हाम्रो पार्टीको सरकारले काम राम्रा गरिरहेको छ तर प्रचार प्रसार हुन सकिरहेको छैन । हाम्रा विरोधी शक्तिको योजना अनुसार काम गर्ने केही ठूला मिडिया सरकारका राम्रा कामहरुको प्रचार नगर्ने, सकेसम्म त्यसलाई ढाकछोप गरेर नराम्रो भएको सरकार असफल भएको सन्देश दिने गरी लागेका छन् । त्यो प्रबृत्तिको विकास भएको छ । अर्को हामीले दुइवटा पार्टी त मिलायौं तर त्यसको व्यवस्थापन तत्काल गर्न नसक्दा पार्टी कमिटिहरु तत्काल बनाउन नसक्दा हामीलाई ठुलो क्षती भयो । हामीले गरेका राम्रा काम जनतामा लाने पार्टीको संरचना निमार्णमा भएको ढिलाईले पनि हामीलाई समस्या बनाएको छ । अर्को हामीले राजनीति व्यवस्था नयाँ ल्यायौं सरकार बनायौं समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्नु पर्छ भनेर समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको नारा बनाई अगाडी बढ्ने योजना बनायौं तर हामीसँग त्यो खालको संरचना निर्माण नभएकोले हिजो केही समस्या भयो, कर्मचारी नहुँदा समस्या भयो पुरातन सोच शैली र आचरणले पनि हामीलाई समस्यामा पारेको छ । पुरानो चिन्तन सोच ब्यवहारले नयाँ उपलब्धी हासिल हुन सक्दैन । यो समस्या पनि छ, सिस्टम नहुँदा पनि काम गर्न र परिणाम निकाल्न असहज हुनेरहेछ । अर्थात सबै कुरा पुरानो हाम्रो आवश्यकता नयाँ हुँदा त्यसका विचको तालमेल नमिल्दा त्यसका विचको अन्तरविरोधले पनि समस्या भएको छ । अर्को हाम्रो देशमा अहिले दलाल पूँजी छ, त्यसले नयाँ परिणाम दिन, रोजगारी सृजना गर्न, उद्योग धन्दाहरु सञ्चालन गर्न सक्दैन । यसले केहि व्यक्तिले लुट्ने, मोजमस्ती गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने खालको छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खासै टेवा दिँदैन । त्यसलाई बदल्नु पर्नेछ । अर्को सुशासन पनि हामीले चाहेजस्तो रुपमा अगाडी बढ्न सकेका छैनौं । यि तमाम समस्याका विचमा संविधानमा टेकेर जनताको मतबाट संघ प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा हाम्रा सरकार दुइतिहाईको हाराहारीमा बनेका छन, यो अनौठो सफलता हाम्रो कम्युनिष्ट पार्टीले प्राप्त गरेको छ । त्यसलाई पचाउन नसक्ने देशिविदेशी शक्तिले पनि हामीलाई समस्या पारिरहेका छन् । असफल पार्न खोजिरहेका छन, षड्यन्त्र गरिरहेका छन । हुँदै नभएका कुरालाई प्रचार गरेर हो जस्तो बनाई दिईरहेका छन, यसले पनि हामीलाई समस्या पारेका छन । यद्यपी यी सबै समस्यालाई चिरेर हामी अगाडी बढ्न खोजिरहेका छौं । अर्को जनताले पनि हामीबाट राम्रो र छिटो परिणाम देओ भन्ने अपेक्षा गरेका छन, यो जायज छ, यसमा हामी योजनाबद्ध रुपले छिटो परिणाम दिने गरी लाग्नै पर्छ, हामी लागि पनि रहेका छौं ।
♦ यति बलियो सरकार छ ति कुरा चिर्न के समस्या भयो त ?
हामीले दुई ठूला पार्टीलाई एकता गरयौं, यसमा हाम्रो समय खर्च भयो । दुई भिन्नाभिन्नै स्कूलबाट आएका नेता कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तीलाई सहि रुपले ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने विना कही असन्तुष्टि भएका लाखौं नेता कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएकोले त्यसको ठिक ढंगले व्यवस्थापन गर्दा पार्टी नेतृत्वलाई केही समस्या भयो, केही समय लाग्यो । अब ति काम सम्पन्न हुँदैछन, पार्टी कमिटीहरु देश भरी बन्दैछन, कतिपय मुख्य मुख्य कमिटी बनि सके अब तल्लो तहका पार्टी संरचना बन्ने दिशामा हाम्रो पार्टी नेताहरु हुनुहुन्छ, हामी छौं । त्यो बनिसके पछि यस्ता भ्रमहरु चिरिन्छन, चिर्नै पर्छ, त्यसो नगरी हामी अगाडी बढ्नै सक्दैनांै । त्यो दिशामा हामी गैसकेका छौं । मैले माथि भनेका कुरा नै प्रमुख समस्या हुन ।
♦ ३ नम्वर प्रदेश संघिय राजधानी भएको प्रदेश पनि हो, यसले अन्य प्रदेशले भन्दा परिणाम राम्रो दिने गरी काम गर्छ भन्ने अपेक्षा सबैको थियो तर नाम र राजधानी नै अहिलेसम्म तोक्न सकेन किन ?
यो काम चाडै हुन्छ । यो काम हिजै हामीले गर्नु पर्दथ्यो तर हामी अलि ढीला भयौं, अब ढिला हुँदैन हामी चाडै गर्छौं । यसको प्रमुख समस्या भनेको चाँही प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्दा सवैको सहमतिमा छलफल गरेर विना विरोध अबरोध सबैले अपनत्व लिने गरी सर्ब स्वीकार्य बनाउने गरी गरौनत भनेर लागेको हुनाले यो काममा पनि समय लाग्यो । तर अब हामी ढिला गर्दैनौं भए यो विधिबाट जान्छौं अर्थात नभए सहमतिको त्यसबाट हुन नसके संविधानले स्थापीत गरेको मान्यता विधिलाई फलो गरेर हामी यो काम चाँडै टुंग्याउँछौं । त्यो हामीले निर्णय गरिसकेका छौं अब ढिला हुँदैन ।
♦ यो संविधानले राम्रो गरेन त्यसमा पनि प्रदेश सरकार त कामै रहेनछ यसले त केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई नै समस्यामा पार्यो भन्न थालेका छन नि जनताले हो ?
संविधानमा नै व्यवस्था भएको कुरा हो यो । त्यसबेला हामीले सार्वभौम जनतासँग छलफल गरेर नै ल्याएको पद्दत्ती हो यो । राज्य र सरकार सवै जनताको लागी हो, विकास र समृद्धि पनि जनताकै लागि हो भन्ने मान्यता हामीले स्थापित गरेका छौं । त्यही भएर सिंहदरबार गाउँगाउँ पुर्याउने योजना भएको हो प्रणाली स्थापित भएको हो जनताले सिंहदरबार धाउनु नपर्ने अबधारणाको विकास गरेर यी सवै काम गरेका छौं । जो हिजो थिएन तर अहिले भएको छ । गाउँलाई अधिकार र श्रोत साधन युक्त बनाईएको छ । जनताकै प्रतिनिधिले सासन प्रशासन सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी सवै ठाउँमा केन्द्रीय सरकार पुग्न पनि सक्दैनथ्यो यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारलाई नकुरी तलै सरकार भेटने विधि बनाएकाले र काम पनि धेरै भैरहेका हुनाले संघियता ठिकछैन प्रदेश सरकार चाँहिदैन भन्ने कुरा विना अर्थको बाँसुरी हो, यो जनताले भनेका छैनन् केही हाम्रो राम्रो भएको देख्न नचाहने कम्युनिष्ट सरकारलाई असफल पार्न खोज्ने तत्वले चलाएको हल्ला हो । संघियताले देश विगार्छ खर्चिलो हुन्छ भनेर नीयोजित रुपमा चालएको हल्ला हो । यो हल्ला हिजो देखि थियो यसलाई जनताले विश्वास गरेनन जनताले संघियताका पक्षधरलाई नै विश्वास गरेर संविधानसभामा पठाए जस अनुसार संबिधान बन्यो । त्यो अहिले कार्यान्वयनमा आई सकेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको मतलाई अपमान गर्नेगरी कुरा गर्नु प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रिक चरित्र होइन र यसका विरुद्धमा टिप्पणी गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
♦ अन्तमा यो सरकार र पार्टीको कामलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
पार्टीले आफ्नो योजना अनुसार काम गरिरहेको छ, पार्टीका सबै संरचना बनिरहेका छन जनतामा पुगिरहेको छ सरकारले पनि योजना अनुसार काम गरिरहेको छ । ठूलाठूला काम गरिरहेको छ, देखिने गरी काम गरिरहेको छ, भोली देखिने गरी काम गर्ने योजनामा छ । यसलाई जनतामा लैजानु पर्छ । प्रचार प्रसार गर्नु पर्छ । जनताको चाहना अनुसारनै काम गरिरहेको छ तर पन्चे र कांग्रेसले लामो समय देखि विगारेको मुलुक ठिक ठाउँमा ल्याउन समय लाग्छ । तर अवस्य ल्याउँछ, जनताको चाहना अनुसार नै काम हुन्छ, भै पनि रहेका छन जो कतिपय देखि पनि सकेको छ । हाम्रा ३ बटै सरकारले राम्रैगरी काम गरिरहको छ, गर्छ, हामीलाई, यो त्यो भन्ने छुट पनि छैन । त्यही ढंगले काम गरिरहेका छौं । समग्रमा सरकार र पार्टीका काम ठिक छन राम्रा छन ।